Maneran-tany: Kisarisarin’ny Ramadany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2010 6:13 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, Français, Español, македонски, English
Sary manokan'ny fankalazana
Koa satria manomboka ny Ramadany any amin'ny ankamaroan'ny firenena eran-tany, dia efa misy ireo hafatra fiarahabana miaraka amin'ity volana masina ity. Miala any amin'ny hajia fandefasana taratasy mankany amin'ireo hafatra avy any amin'ny fitondrana, dia efa mivoaka ofisialy any amin'ny aterineto ny Ramadany. Na dia ny vohikala fampihomehezana someecards aza dia mametraka sokajy manokana ho an'ireo karazana karatra Ramadany.
Isan-taona, ireo silamo mpampiasa tranonkala maneran-tany dia mifampizara sary ho fankalazany ny Ramadany. Raha manetriketrika ny ankamaroan'ireo sary ireo, tahaka ny iray etsy ankavia, matetika dia feno hatsikana mivezivezy koa any.
Ny zavatra iray tranainy be mpitia izay mbola mandehandeha amin'ity taona ity dia peta-drindrina iray, angamba natao ho ana hetsika fanaon'ny mpianatra, navoaka tao amin'ny Failblog. Ity peta-drindrina ity dia manàsa ireo mpianatra handalina mikasika ny Ramadan, “ny volan'ny fifadian-kanina” amin'ny mitatao vovonana, miaraka amin'ireo sakafo aroso:
Moo, mpitoraka blaogy tompon'andraikitry ny “Mooslim lolcats” meme, nametraka sary mahatsikaiky mba hirariana Ramadany mahafinaritra amin'ity taona ity ho anireo mpamaky, tao anatina lahatsoratra iray mitondra ny lohateny hoe “Ram a dan moo barracks”:
Misy sary iray hafa mitetitety manerana ny Facebook amin'ity taona ity izay mampiditra ny anaran'ireo Silamo malaza Tariq Ramadan, ny Filoha Ejiptiana Hosni Mubarak, ary ny mpilalao basketball malaza Kareem Abdul Jabbar:
Ho an'ireo sary mahatsikaiky hafa mikasika ny Ramadany, amin'ny teny Anglisy sy Arabo, jereo ity famoahana ity ao amin'ny jannah.org.